फेरि आयो दुखद खबर: पेट दुख्यो भनेकि छोरिको उपचार नगरिदिएपछी निधन (भिडियो हेर्नुहोस)
भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ भैरहवा मेडिकल कलेजको गेटमा नाराजुलुस भइरहेको छ । सयौंको संख्यामा उपस्थित सर्वसाधारणले अस्पताल प्रशासन विरुद्ध नारावाजी गरिरहेका छन् । उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरवाहीले बालिकाको निधन भएको भन्दै आफन्त विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
कपिलवस्तु जिल्लाको वाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर २ बैजलपुरकी ८ वर्षीया सुविका थापालाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याएको थियो । पेट दुखेर अस्पताल लगिएकी बालिकाको उपचार नर्सहरु आफै गर्न थाले । ८ घण्टा सम्म नर्सहरुले चिकित्सक नबोलाएर आफै उपचार गरेका थिए । केही बेरमा डाक्टर आउनुहुन्छ भन्दै आफन्तलाई कुराएर राखे ।
बालिकालाई के रोग लागेको हो भन्ने पहिचान नै नगरी नर्सको भरमा उपचार गरेका कारण उनको निधन भयो । अस्पतालकै लापरवाहीका कारण बालिकाले ज्या न गुमाउनु परेको भन्दै आफन्त आ क्रोशित भएका हुन् । अस्पताल अगाडी यति ठूलो मास छ की यस्तो लाग्छ पुरै कपिलबस्तु उर्लिएको छ ।
दोशीलाई कारवाहीको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनका कारण अस्पतालको सेवा पनि प्रभावित भएको छ । विरामी भएर आपतकालिन कक्षमा भर्ना गरिएको बालिकाले उपचार नै नपाई ज्यान गुमाउनु परेपछि अस्पतालको के काम ? आन्दोलनमा सहभागी आफन्तको भनाई छ ।
उनीहरुले लापरवाही गर्ने चिकित्सक, नर्सले घटनामा गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुपर्ने र पीडितलाई क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यस्तो थियो घटना : रुपन्देहीको भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल (युसिएमएस) को ग म्भीर लापरबाहीका कारण एक ८ वर्षीया बालिकाको निधन भएको छ।
कपिलवस्तु जिल्लाको वाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर २ बैजलपुरकी सुविका थापा मगरलाई अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याएको आठ घण्टासम्म पनि चिकित्सक नआएका कारण बालिकाको निधन भएको परिवारको आरोप छ। उनीहरुका अनुसार नर्सहरुको भरमा उपचार गर्दा बालिकाको निधन भएको हो।
८ वर्षिया सुबिकालाई पेटमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार उपचारका लागि परिवारका सदस्यले बुटवलस्थित आम्दा अस्पताल पुर्याएका थिए। आम्दाले भिडियो एक्सरे गर्ने चिकित्सक नभएको भन्दै भैरहवास्थित मेडिकल कलेज रिफर गरेको हो। दक्ष चिकित्सकको सेवा पनि पाइने र राम्रो उपचार हुने भन्दै शुक्रबार राति १२ बजे मेडिकल कलेज लगिएको आफन्तले बताएका छन्।
अस्पतालका प्रवक्ता तथा जनसम्पर्क अधिकारी सुशिल गुरुङ बालिकालाई अस्पतालमा उपचारका लागि राति १ बजे ल्याएको दाबी गर्छन्।
उनले बालिकाको उपचारका क्रममा भएको निधनमा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा प्राविधिकहरुको दोष छ या छैन भन्ने छानबिन भइरहेको र छानबिन समिति बनाएको बताए। डा. सञ्जिव रञ्जनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको छ।
Prevपतिमाथी हातपात भएपछी पुण्य पत्नी रुँदै मिडियामा: पुरै भिडियो हेर्नुहोस
Nextयस्ता श्रीमती कसैलाई नपरोस: श्रीमानको ९० लाख लिगेर कहाँ भागिन त श्रीमति (पुरै भिडियो)